Maxkamadda sare Yurub: Uber waxuu la mid yahay Tagsi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadda sare Yurub: Uber waxuu la mid yahay Tagsi
La daabacay onsdag 20 december 2017 kl 11.17
Maxkamada sare ee midowga Yurub ayaa maanta xukuntay in Uber uu la mid yahay sida tagaasida caadiga ah loona sharciyeen karo sida tagaasida.
Xukunka ay maanta gaartay maxkamada sare Yurub ee fadhigeedu yahay Luxemburg ayaa Uber ka dhigaya shirkada ka howl-gasha adeega gaadiidka dadweynaha, waxuuna xukunkan saammeyn doona dhammaan dalalka ku jira midowga Yurub.
Uber qudheeda ayaa isku difaacda in ay tahay shirkad farsamo oo leh bog xagga intert-ka oo isku xira darawalo gawaari caadi ah leh iyo dadka doonaya in meel loo kaxeeyo.
Hase yeeshee, urur ay leeyiihiin tagaasileyda magaaladda Barcelona ee dalka Spain ayaa diiday sheegashadaasi Uber waxayna shirkada ka gudbiyeen dacwad maxkamad tasi oo gaartay ilaa iyo maxkamada sare ee midowga Yurub.
Tagaasileyda magaaladda Barcelona ayaa ku dooday in adeega Uber uu la mid yahay sida tagaaida caaiga ah loona baahan yahay in la hoos keeno sharciyada u yaalla tagaasida caadiga ah.
Uber oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa hadal ay soo saartay kaga soo qaaday wax sidaasi u buurneen xukunka maxkamada Yurub, iyada oo Uber ku tilmaamtay go’aanka mid wax sidaasi ah ka bedeleen inta badan dalalka Yurub maadaama hore ugu shaqeeynayeen sharciyada gaadiidka.
Shirkada Uber ayaa sidoo kale, hadalka ay soo saartay ku sheegtay in arrinka la xiriira in la hoos geeyo sharciyada gaadiidka uu sidoo kale ka hortaagan yahay malaayiin ruux in ay isticmaalaan adeegooda app-kooda Uber.